Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlena
Indlu enegumbi elinye kwi-microdistrict ehloniphekileyo yaseMinsk, isithili esicocekileyo se-ecologically, ngaphandle kweendawo zokuvelisa kunye namahlathi abanzi ahlala kufuphi, amanzi kumbhobho ovela kumaqula obugcisa. Phakathi komgama wokuhamba kukho i-hypermarket ye-GIPPO, indawo yokuthenga ye-Spektr, i-Rublevsky, iivenkile ze-Euroopt, iivenkile zokutya okukhawulezayo i-MacDonalds, i-BURGER KING, i-Domino`s Pizza, i-Sbarro, i-KFC. Kufuphi nendlu (imizuzu eyi-7 yokuhamba okanye i-1 yokumisa izithuthi zikawonkewonke) kukho isikhululo semetro sase-Uruchye.
Indawo ecocekileyo nekhululekileyo, ebanzi kakhulu, ebekwe kweyona ndawo incinci kunye neyona ndawo imnandi yokuhlala kwisixeko saseMinsk-Uruchcha. Isithili ngokufanelekileyo sinandipha idumela elihle phakathi kwabahlali baseMinsk kunye neendwendwe zekomkhulu. Imeko ye-ecological ithandeka kakhulu - indawo yokuhlala ifumaneka emva kwendlela ye-Minsk ring kwindlela yaseMoscow. Kufuphi namahlathi amakhulu yaye akukho mashishini athengisayo. Amanzi avela kumbhobho yeyona nto ingcono eMinsk. ukuthathwa kwayo kuphuma kwimithombo yezobugcisa. Nangona ukude okukude kumbindi wedolophu, akunzima ukufumana ukusuka e-Uruchcha: isondele ngokusondeleyo kumthambo omkhulu wezothutho we-Minsk - I-Independence Avenue, kukho isikhululo se-metro segama elifanayo. Kwiminyaka yakutshanje, i-Uruchcha iye yaba yenye yezona zithili ezihloniphekileyo zaseMinsk.
4.90 ·Izimvo eziyi-41
Eyona ndawo icocekileyo yendalo kwisixeko saseMinsk. Isithili ngokufanelekileyo sinandipha idumela elihle phakathi kwabahlali baseMinsk kunye neendwendwe zekomkhulu. Imeko ye-ecological ithandeka kakhulu - indawo yokuhlala ifumaneka emva kwendlela ye-Minsk ring kwindlela yaseMoscow. Kufuphi namahlathi amakhulu yaye akukho mashishini athengisayo. Amanzi avela kumbhobho yeyona nto ingcono eMinsk. ukuthathwa kwayo kuphuma kwimithombo yezobugcisa. Nangona ukude okukude kumbindi wedolophu, akunzima ukufumana ukusuka e-Uruchcha: isondele ngokusondeleyo kumthambo omkhulu wezothutho we-Minsk - I-Independence Avenue, kukho isikhululo se-metro segama elifanayo. Kwiminyaka yakutshanje, i-Uruchcha iye yaba yenye yezona zithili ezihloniphekileyo zaseMinsk.
Umbuki zindwendwe ngu- Alena
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Minsk